Mareykanka oo ku dhiirri geliyey Itoobiya in aysan markale soo gelin Soomaaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Mareykanka oo ku dhiirri geliyey Itoobiya in aysan markale soo gelin Soomaaliya. [Akhris …]
Nairobi, July 05-Kaaliyaha Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ee arrimaha Africa Johnnie Carson ayaa waxaa uu sheegey in Mareykanka uu ku dhiirrigelinayo dalka Itoobiya in aysan soo gelin gudaha dalka Soomaaliya.
Mr Carson ayaa waxaa uu ku tilmaamey in danta Itoobiya iyo tan waddamada ku yaalla Geeska Afrikaba ay ku jirta in ay ku sii sugnaadaan gudaha dalkeeda ciidamada Itoobiya.
?xukuumadda Itoobiya waxaa ay si joogta ah oo aad u dhaw ay ula socotaa horumarka ka soconaya dalka Soomaaliya? ayuu yidhi Mr Carson oo wakaaladda Wararka ee Reuters kula hadlayey magaalada Nairobi isaga oo ku sii waajahan maalinta Isniinta magaalada Adis ababa.
?Cadawnimo muddo dheer soo taagneed oo u dhaxeysa Somalida iyo Itoobiyaanka darteed, waxaan ku dhiirri gelinayaa Itoobiyaanku in aysan qabsan markale Soomaaliya, ma?ahan dantooda in ay taas sammeeyaan waxaana uu noqonayaa dadaalkooda xaqiiqdii mid lid ku ah xukuumadda? ayuu ku sii yidhi wareysiga Mr Carson.
Waddamada deriska ah iyo xukuumadaha Reer Galbeedka waxaa ay cabsi ka qabaan in haddii maamulka Soomaalida meesha laga tuuro ay meesha ka dhalaneyso qaran aan sharci lahayn oo har u ah Al Qaacida si ay ugu tababartaan Malleeshiyyaad isla markaana deganaansho la?aan ku abuura deegaanka weerarrana la beegsada waddamada horey u marey.
Dad degan gobollo badan oo Soomaaliya ku yaalla ayaa waxaa ay sheegeen in ay arkeen ciidammo Itoobiyaan ah ku waas oo soo galey marar kala duwan labadii bilood ee la soo dhaafey, waxaana mar horeba arrintaas iska fogeeyey xukuumadda Addis Ababa , waxaase mar danbe ay sheegtey in ay galeyso Soomaaliya haddii ay hesho fasax.
Hadalka ka soo yeeraya xukuumadda Mareykanka ayaa waxaa uu u muuqda mid iska fogeynaya in taageero uu siinayo in ciidammo ka socda Itoobiy ay markale ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya xilli ay sii baaheyso awoodda kooxaha Islaamiyiinta ah ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Cabdifataax Cumar Geeddi.